Badhasaabka Gobolka Saaxil Oo Si Sharcidaro Ah U Bixiyay Dersin Ugaadh Ah, Madaarka Iyo Dekedda Berbera Oo Noqday Marinka Tahriibta Ugaadha Iyo Xayawaanka Duurjoogta – Araweelo News Network (Archive)
Badhasaabka Gobolka Saaxil Oo Si Sharcidaro Ah U Bixiyay Dersin Ugaadh Ah, Madaarka Iyo Dekedda Berbera Oo Noqday Marinka Tahriibta Ugaadha Iyo Xayawaanka Duurjoogta
Hargeysa(ANN)“Dhibaato baddan iyo gacandhaaf ayaa lagu hayaa Ugaadha, cida ku haysaana waa dadka Somaliland, Ugaadha dalka ku nool qaar waa kuwa Hilibka cuna, sida Libaaxa, Shabeelka, waraabaha, Harimcadka iyo kuwo kale, xayawaan kale oo faraha baddan oo illaahay dalkan
ku beeray ayaa jira. Sida Deerada, Cawsha, Dabataagta Iwm, waana hanti qaranku leeyahay, mana aha inay masuuliyiinta qaranku u qaataan inay awood u leeyihiin bixintooda. “ sidaa waxa yidhi Agaasimaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta Deegaanka iyo Miyiga Maxamuud Muuse Xaaji Cabdi (Galaydh) oo shalay waraysi gaar ah siiyay Shebekada wararka ee Araweelonews iyo telefishanka Somaliland Space Chanel .
“wayna jirtaa in dhibaato baddan iyo gacan dhaaf lagu hayo Ugaadha , tusaale ahaan waxa jiray harimcado lagu soo guray shandado. Laakiin nasiib wanaag waa la qabtay, waxay ahaayeen shan harimcad waxa la keenay halkan labadii yar yaraa way baqtiyeen, kuwii kalena Zuumka ayay ku jiraan. Nimanka Carabta ah ee waxan sitay waxa siiyay dadkeena , wayna baxsadeen markii la qabtay kuwii siiyay.”
“Tobaneeyo ugaadh ah oo laga dhoofiyay Madaarka, waxa soo gudbiyay isu-duwaha gobolka Saaxil ana waan sii gudbiyay oo wasiirka ayaan u gudbiyay, wasiirkuna arrintaa wuu u gudbiyay Madaxweynaha, markaa kolay arrintaansi way dhacday waana la baadhayaa. Laakiin waxaan dadweynaha Somaliland iyo madaxda qarankaba u sheegayaa awooda cida hadyad u bixin karta hantida qaranka waa Madaxweynaha oo keliya sida uu dhigayo sharciga 094, walaa wasiir walaa Badhasaab ma bixin karaan.” Agaasimaha oo la weydiiyay cida bixisay ugaadhaa iyadoo aanay wasaarad ahaan waxba kala socon, waxa uu sheegay in Badhasaabka gobolka Saaxil Ramaax bixiyay, taas oo uu sheegay inaanay aqbalayn inay wixii ay qaranka masuulka uga ahaayeen ay bixiyaan Badhasaab iyo Maayar toona, isla markaana aanay aqbalayn masuuliyiinta sidaa u dhaqmaya.”
Agaasimaha Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta Deegaanka iyo Miyiga waxa uu sheegay inay magaalooyinka Burco iyo Hargeysa dhowaan ka samaynayaan laba meelood oo Zoom lagu xanaaneeyo Ugaadha, sidoo kale ay ka samaynayaan gobolka Sanaag, gaar ahaan Buurta Daallo goobo dalxiis iyo Baarkino ah iyo sidoo kale goob weyn oo xayawaanka iyo duur joogta lagu xanaaneeyo.
Mr. Galaydh waxa uu sheegay inay ciidanka ilaalada xeebuha, Bilayska iyo maamulka madaarkuba si fiican ula shaqeeyaan, wuxuuna ku dheeraaday inay dadku ilaashadaan khayraadka dalkooda Ugaadha iyo xayawaanka kaleba, isla markaana loo baahan yahay inay dadku wax qabsadaan oo ay dedaal sameeyaan, wuxuuna isagoo ka hadlaya xaalufinta deegaanka sheegay in dhirta, Xoolaha iyo dadku aanay kala maarmayn oo aanay noloshu jirayn haddii la waayo neefka iyo geedka. Sidaa darteed ay dadku ilaashadaan deegaanka la xaalufinayo.
Sidoo kale waxa uu xusay inay wadaan qorshayaal harooyin waaweyn oo ilaa labaatan haro ah laga hirgelinayo dalka gobolada oo dhan, kuwaas oo ay soo sahamiyeen wasaarad ahaan dhowaan, isla markaana la bilaabayo dhowaan hawshooda, isagoo xusay inay hawshaa dhinac socdaan seerayaal waaweyn oo iyagana laga hirgelinayo dalka oo dhan.
Wuxuuna digiin usoo jeediyay dadka tuulooyinka ka samaynaya meelaha aan ku haboonayn, kuwaas oo uu sheegay inay khaatiyaan ka dhigeen deegaanka, wuxuu soo bandhigay qoraal digreeto wasaaradu soo saartay oo lagu mamnuucayo arrintaa oo sida uu sheegay ay dabada ka wadaan hay’addo sida WFP oo aan waxyeelo mooyee dalkan iyo dadkan waxba u qaban, kuwaas oo dadka u sheega inay Raashin siiyaan. Laakiin aan waxba siin ee dadkii gobolada kusoo lugooyay magaalada caasimada ah ee Hargeysa.
Mr. Galaydh waxa kaloo uu sheegay inay deegaanka dhibaato iyo fidmo ku hayaan dad ka yimaada qurabaha oo uu sheegay inay meesha ay laba waxarood ku arkaanba odhanayaan inay lacag yar bixiyaan Beer ayaan ka samaynayaa, wuxuuna sheegay in aanay dadk noocaa ah ee qurbaha ka yimaadaa fidno kusoo kordhin dadka iyo dalka.
Bileyska Somaliland ee magaalada Berbera ayaa gacanta ku dhigay todobaadkii hore Harimcado la doonayay in si tuugo ah looga tahriibiyo Madaarka Berbera, kuwaas oo la doonayay in la saaro diyaarad tegaysay dhinaca magaalada Dubai ee dalka
Published April 17, 2011 By info
Taliyaha Ciidanka Bilayska Somaliland Oo Sheegay Inay Maxkamad Geynayaan Koox Ciidanka Ah Oo Amardiido Sameeyay
Xukuumadda Imaraadka Oo Madaxweyne Siilaanyo Ku Martiqaaday Casuumad Balaadhan Oo Ay Ka Qaybgaleen Shirkado Caalami Ah Iyo Wefdiga Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabanaya